June 15, 2019 Xafiiska Puntland 0
Madaxwaynihii hore ee Galmudug oo si cajiib ah uga hadlay Xasuuqii xalay runta usheegay reer Gaalkacyo.
Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si weyn u cambaareeyay dad Shacab ah oo xalay lagu laayay Magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug ka dib markii Koox degaanka ah ay ku eedeeyeen in ay
AKHRISO:- Madaxwayne Xasan Sheikh oo ahaa aas-aasihii Galmudug ayaa ka hadlay xasuuqii xalay dhacay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u cambaareeyay dad Shacab ah oo xalay lagu laayay Magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug ka dib markii Koox degaanka ah ay ku eedeeyeen in ay dileen
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareye ayaa sheegay in falkaasi uu yahay Mid naxdin badan, islamarkaana ay baari doonaan sidda ay wax u dhaceen. Waxaa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono
Degdeg:- KGS oo sheegtay in deegaanadeeda ay kasoo jeedaan dadkii xalay lagu xasuuqay Gaalkacyo “Galmudug gumaad baa kasocda”.
Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay weerar xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay sagaal qof oo ka soo jeeda degaannadaas. Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan ayaa sheegay in dhamaan
June 15, 2019 Xafiiska Puntland 11
Wararka ay heleyso Marqaannews ayaa aheegaya in caawa 9 qof lagu dilay duleedka Gaalkacyo halka ruux 10aadna uu dhaawac soo gaaray. Wararku waxay intaa ku darayaan in dadkan hal meel lagu toogtay sida dad soo
June 14, 2019 Xafiiska Puntland 8
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Maxamed ayaa jimcihii maanta dib ugu laabtay Garoowe kadib markii uu fashilmay shirkii madaxda dowlad goboleedyada oo uu kaga qeyb-geli lahaa magaalada Nairobi. Deni ayaa helay soo dhaweyn balaadhan oo ay
Xisaabiyaha Gobolada Sanaag iyo Haylaan Axmed Aadan, taliyaha Turubataariyada Ugaas C/qaadir Cawil (Citile) iyo Madaxa kastamada labada Gobol Sanaag iyo Haylaan Sahal Faarax ayaa ka waramay howlgalka dardar gelinta Cashuuraha Gobalka Sanaag. Howlaganka ayaa qayb
June 14, 2019 Xafiiska Puntland 3
Wasiirrada maaliyadda ee dalalka Bariga Afrika ayaa soo bandhigay miisaaniyadda sanadlaha ah ee dalalkooda. Wasiirrada Kenya, Tanzania, Uganda iyo Rwanda ayaa Barlamaannadooda u soo gudbiyey miisaaniyadda sanadka 2019/20. Kenya oo ugu badan ayey miisanayaddeedu tahay
Alshabaab oo ubareeray in ay soo afduubtaan Askar katirsan dowladda Kenya.
June 14, 2019 Xafiiska Puntland 0
Dagaalamayaal Al-shabaab ayaa sheegay in hawlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degaanno hoos yimaada magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya ay ku soo afduubteen askar ka tirsan Booliiska dalka Kenya. Qoraal ka soo baxay
DAAWO:- KGS oo si adag uweerartay Galmudug “Dadkii la dilay xogtooda waa in degdeg aan uhelnaa waayo anagay naga dhasheen”.
June 13, 2019 Xafiiska Puntland 1
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane C/Casiis Xasan Maxamed lafta-gareen ayaa shir gudoomiyey shirka todobaadlaha ay yeeshaan Gollaha wasiirada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed , Shirka ayaa waxaa looga hadlay arimaha Amaanka ,Dhaqaalaha, Siyaasadda, waxaana
DAAWO:- Masuul katirsan DFS oo maanta laga wareejiyay guri uu leeyahay muwaadin somaliyeed oo muddo 28sano xoog kuhaystay.
June 13, 2019 Xafiiska Puntland 0
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku guuleesytay inuu dib ugu soo celiyo muwaadin somaliyeed oo lagu magacaabo Eng.Cali Maxamed Baare gurigiisa kaas oo xoog looga haystay muddo 28sano ah. Guriga muwaadinkaan waxaa haystay seddex xidigle katirsan
DAAWO:- MD Farmaajo o musuqmaasuq uga digay maamul gobolka Banaadir + Dardaaran dhaxalgal ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka dhegeystay Guddoonka iyo Hawlwadeennada Gobolka Banaadir warbixin ku saabsan waxqabadkooda iyo qorshaha maamul ayaa ku bogaadiyey doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan Barnaamijka Isxilqaan ee
Daawo:- Ciidamada Khaatuma oo weerar kuqaaday fariisin Somaliland ay ku leedahay duleedka Tukarraq.
June 13, 2019 Xafiiska Puntland 6
Sida ay sheegayaan wararja inaga soo gaaraya gobolka Sool waxaa xalay dagaal xoogan uu ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada Tukarraq. Dagaalka ayaa udhaxeeyay Ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Khaatuma waxaana uu geystay khasaare
Daawo:- Beesha Boqor Buurmadoow oo hamjabaad.udirtay Biixi iyo Badhadaabkiisa Sanaag.
Cuqaasha iyo waxgarad Kadoo jeeda Beesha biciide Oo ah Beesha uu ka dhashay Boqor Buurmadow ayaa maanta isugu yimid Kulan balaaran. Kualnkooda ayay kaga hadleen hadalo kasoo yeeray masuuliyiin katirsan Somaluland oo kusaabsan in Boqor
Xildhibaan Rashiid oo wadada badhtankeeda ku garaacay Xildhibaanad haweeneey ah oo isku deegaan laga soo doorto.
June 13, 2019 Xafiiska Puntland 4
Xildhibaan Rashiid Amiin oo laga soo doorto Bariga Wajeer, ayaa maanta weeraray xildhibaan Faaduma Geedi oo iyana laga soo doorto Wajeer, kana wada tirsan yihiin baarlamanka Kenya. Rashiid ayaa la sheegay inuu Faaduma, oo ay
Maamulka Puntland ayaa Magaalda badhan ee xarunta gobolka Sanaag waxa uu ka bilaabay howlo maamul daadajin iyo cashuur ururin iyo mid amniga iyo kala danbaynta lagu xaqiijinayo kaantorolada magaalada wixii soo galaya iyo wxii kaso
DFS oo fashilisay shirkii maamulada mucaaradka ah ay ku yeelan lahaayeen Nairobi.
Waxaa gebi ahaanba fashilmay shir si wadajir ah madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ku dhex mari lahaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Weli si rasmiya looma sheegin arrimaha qarsoon ee keenay in shirku
Saacado badan kadib DFS oo ka hadashay dagaalkii shalay lala galay Yuusuf Dabageed.
June 12, 2019 Xafiiska Puntland 0
Xukuumadda Soomaaliya ayaa saacado kadib ka hadashay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Kalabeyr ee Gobolka Hiiraan,kaas oo uu ku geeriyooday Taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Macow Xalane. Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga Xukuumadda
June 12, 2019 Xafiiska Puntland 9
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa gowr dhaw lagaarsiiyay meydka afar ruux oo dhalasho ahaan kasoo jeeday deegaanada KGS. Afartaan ruux ayaa lagu dilay deegaan kudhaw magaaladaasi wallow warar kala duwan ay kasoo baxayaan dilkooda.